I-WhatsApp yePC, funda ukuba ungayisebenzisa njani kwikhompyuter yakho | Iindaba zeGajethi
Zingakanani izinto esiziphuphileyo zokuba sikwazi ukusebenzisa I-whatsapp ye-pc. Oku kunokwenzeka kuthi kuvela kwisandla seWhatsApp yeWebhu, ngale ndlela, saqala ukubanakho ukusebenzisa iWhatsApp yeWindows yeWindows nakweyiphi na isikhangeli, ngokulula kufuneka sivumelanise isixhobo sethu esiphathwayo nge WhatsApp Web.
Nangona kunjalo, ngumsebenzi obusoloko unesiqingatha, ke abasebenzisi bafuna isicelo sendalo, inkqubo esinokuyifaka ukuze sincokole kwi-WhatsApp kwi-PC yethu ngaphandle kwesidingo sokuvula nasiphi na isikhangeli, kusetyenziswa amandla kunye nezixhobo oku kuthetha . UWhatsApp uthathe isigqibo sokuthatha amanyathelo, yiyo loo nto, ngoMatshi 2016, I-WhatsApp isungule usetyenziso lwePC ngeSpanish, esiyifaka, esivumela ukuba sincokole nabo bonke abafowunelwa bethu kuWhatsApp ngokukhawuleza kwaye ngokulula, siya kukuxelela ukuba kanjani.
1 Khuphela i-WhatsApp yePC
2 Uyifaka njani i-WhatsApp kwi-PC yakho
Khuphela i-WhatsApp yePC
Ukuba into esiyifunayo kukukhuphela i-WhatsApp ye-PC, inkqubo ayinakuba lula, i-WhatApp iyenzile icandelo elitsha kwiwebhusayithi yakho esemthethweni. Nje ukuba singene, iwebhusayithi ibhaqa ukuba yeyiphi na inkqubo esiyisebenzisayo, kwaye ngaloo ndlela singafaka I-WhatsApp yeWindows PC Ngendlela elula, kodwa ayisiyiyo kuphela, usetyenziso luyahambelana neMac OS X.
La Isicelo se-WhatsApp siyahambelana neWindows 8, Windows 8.1 kunye Windows 10, ivula uluhlu olubanzi lwezinto ezinokubakho ngokuhambelana, njengoko ziinkqubo ezisebenzayo.
Uyifaka njani i-WhatsApp kwi-PC yakho
Ngoku into ebalulekileyo kukwazi uyifaka njani i-WhatsApp kwi-PC, kwaye ayinakuba lula. Nje ukuba i-WhatsApp yeWindows ikhutshelwe kwisiza ebesikhe sayichaza ngaphambili, ngokulula siye kwifolda yethu "yokukhuphela" kwaye senze ifayile ye .exe ekhutshelweyo. Xa ukufakela kugqityiwe, siqala inkqubo, kwaye ukuze iqale ukusebenza, siya kulandela amanyathelo afanayo nakwiWhastApp Web.
Oko kukuthi, siya kuseto lwe-WhatsApp kwi-smartphone yethu kwaye ucofe ukhetho ku "WhatsApp Web", ngolu hlobo ikhamera iya kuvula kwaye singaskena ikhowudi "Bidi" Oko kusibonisa kwiscreen sePC yethu. Ukususela kuloo mzuzu, sinokusebenzisa i-WhatsApp kwi-PC yethu ngokungathi sisicelo.